Giống Chanh Không Hạt- Hướng dẫn trồng chanh không hạt xuất khẩu | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Giống Chanh Không Hạt- Hướng dẫn trồng chanh không hạt xuất khẩu | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Ekuqaleni Intshayelelo yeentlobo ze-lemon ezingenambewu:
2 Imiyalelo yobuchwephesha yokukhulisa izityalo ezingenazimbewu ezithunyelwa kumazwe angaphandle:
Ifuna umhlaba welamuni ongenazimbewu
Ixesha lokukhula kwelamuni engenazimbewu
Ukuxinana kokutyala iilamuni ezingenambewu
Ukuchumisa kunye nokukhathalela imithi yelamuni engenazimbewu
Ukunyangwa kweentyatyambo kwiilamuni ezingenambewu
Phinda uchumise imithi yelamuni engenazimbewu emva kokuvuna, ukuthena amasebe
Ukuthintelwa kunye nokunyangwa kwe-lemon engenambewu
3 Apho kuthengwa khona izithole zelamuni ezingenambewu
1 1 Ukwaziswa kweentlobo zelemon ezingenambewu:
2 2 Imiyalelo yobuchwephesha yokukhulisa izityalo ezingenazimbewu ezithunyelwa kumazwe angaphandle:
2.1 Ifuna umhlaba welamuni ongenazimbewu
2.2 Ixesha lokukhula kwelamuni engenazimbewu
2.3 Ukuxinana kokutyala kwelamuni engenambewu:
2.4 Ukuchumisa kunye nokukhathalela imithi yelamuni engenazimbewu
2.5 Ukunyangwa kweentyatyambo kwiilamuni ezingenambewu
2.5.1 Chuba imithi yelamuni engenazimbewu
2.6 Phinda uchumise imithi yelamuni engenazimbewu emva kokuvuna, ukuthena amasebe… .
2.7 Amanyathelo okwenza i-canopy yeelamuni ezingenambewu:
2.8 Ukuthintelwa kunye nokunyangwa kwe-lemon engenambewu
3 3 Apho kuthengwa khona izithole zelamuni ezingenambewu
1 Ukwaziswa kweentlobo zelemon ezingenambewu:
ilamuni engenambewu, I-Lim Ca Paper Lemon, iLemon yaseMelika, iLemon yeSeedless yaseMelika inegama lesiNgesi iPersian Lime. Iimpawu zomthi we-lemon ongenambewu kukuba ngumthi ongenameva, ofanelekileyo kwaye ukhula kakuhle kunye nemozulu yaseVietnam.Iintyatyambo ze-lemon ezingenazimbewu zikhula zibe ngamaqela, amaqabunga amhlophe, ukumila kwesiqhamo side kancinane, simuncu kwaye sinevumba elimnandi.
Iintlobo zeelamuni ezingenambewu ameva ambalwa kwisikhondo kwaye isiqhamo sifana nelamuni yesintu. Xa amasebe ekwinqanaba elivuthiweyo, i-spines iyancipha, umthi unika iziqhamo ezingalunganga, i-bunch inika iziqhamo ezi-7-8. Ukususela kwi-3 ukuya kunyaka we-4, isivuno siya kuba phezulu. Iilamuni ezingenambewu ziya kuvunwa ngaphezulu kweminyaka eli-10 phambi kokuba ziwohloke
Umthi ungakhula ube yi-6m ubude, isiqu asinameva, amagqabi angqukuva, isiqhamo sidityanisiwe, asinambewu (okanye iimbewu ezimbalwa).
Ilamuni engenambewu kufuneka ivelise iziqhamo unyaka wonke. Lo mthi ukwanamandla okumelana nezifo, ngakumbi angosulelwa sisifo semithanjana eluhlaza njengeminye imithi yesitrasi
I-lemon engenazimbewu kulula ukuyikhulisa, ayichaphazeleki kakhulu zizinambuzane kunye nezifo, kwaye ivelisa iziqhamo unyaka wonke, ukusuka ekulimeni ukuya ekuvuneni kwiinyanga ezili-18. Ngokwe-avareji, umthi uya kunika malunga ne-40 kg, i-avareji yesivuno imalunga ne-30-40 yeetoni zeziqhamo/ha/ngonyaka, ithengisa ngamaxabiso asuka kwi-20 ukuya kwi-30,000 VND ngekg, kuthatyathwe iindleko zamafama asenengeniso engaphezu kwama-400. Isigidi se-VND ngonyaka.
I-Seedless lemon yenye yeemveliso zezolimo ezinexabiso eliphezulu lokuthumela ngaphandle kunye nemveliso ezinzileyo. Nantsi imiyalelo yokutyala ilamuni engenambewu ukuthumela ngaphandle okujoliswe kuko.
Ilamuni engenambewu iyakwazi ukuziqhelanisa nokusingqongileyo okubanzi, ngoko ke ukukhetha umhlaba wokutyala imithi yeLamuni akuyomfuneko kakhulu. Ilamuni engenambewu Ilungele zonke iindidi zomhlaba ukuba nje umhlaba ungagalelwanga manzi kwaye unkcenkceshelwe ngexesha lonyaka elomileyo kwanele. Kodwa ukuze umthi welamuni ukhule ngokugqibeleleyo, umhlaba olungileyo ukwangumba ophambili. Ngoko ke, owona mhlaba ufanelekileyo ngumhlaba okhululekileyo, ocebileyo we-humus. Kuyimfuneko ukuthatha amanyathelo okuthintela ukugcwala kwamanzi kunye nembalela yemithi ngoku.
Ilamuni engenambewu Ingatyalwa unyaka wonke, ngakumbi isityalo sase-Winter-Spring sityalwe ngoFebruwari-Matshi, isityalo se-Autumn-Winter sityalwa ngo-Agasti-Oktobha.
Ngaphambi kokuqhubeka neendlela zokutyala Ilamuni engenambewu Kufuneka sombe umngxuma kwinyanga ezi-1-2 phambi kwexesha, kwindawo ephantsi umngxuma ubunzulu obungama-30-40cm, umhlaba osezintabeni ubunzulu obungama-60-80cm.
Ukumba imisele: Ukwandisa i-coefficient yokusetyenziswa komhlaba, ububanzi be-avareji yemisele yi-1.8m – 2m. Noko ke, ubukhulu bomsele buxhomekeke ekubeni ubunzulu okanye ubunzulu kangakanani umaleko wokulima.
Xa umhlaba wokufama uguqulwa ube yigadi okanye isitiya esixubeneyo, ubuchule buqhele ukusetyenziswa kwimat okanye uhlobo lwethishu. Ukuze umthi weLamuni ukhule kakuhle, kunyaka wokuqala xa kusenziwa isitiya, kufuneka sityale izityalo ezikwaziyo ukunyamezela i-pH ephantsi: ummoba, ipayinapile… emva koko ukhulise iLemon.
Ukuxinana kokutyala kwelamuni engenambewu:
Ngenxa yokudityaniswa kwezityalo ezahlukeneyo, ukuxinana kwemithi kuyaguquguquka kakhulu, kuluhlu lwemithi engama-40-100/umntu (1,000m2), kunye nomyinge wemithi engama-70/uluntu.
Umgama wokutyala iLamuni (4m x 4m) okanye (5m x 5m). Lo mgama uyahluka ngokuxhomekeke ekubeni kukho ukulinywa ngokudibeneyo okanye ulimo olumandla.
Emva koko kuyimfuneko ukulungiselela inani elilandelayo lesichumisi: Umgquba obolileyo: 20-30 kg; i-phosphate fertilizer 0.5 kg; potassium 0.1kg; I-lime powder 1 – 1.5 kg Xuba inani lesichumisi kunye nomhlaba, unkcenkceshele, malunga neentsuku eziyi-10-15 kamva zingatyalwa.
Umhlaba wokukhula kwethishu udla ngokuba ngumhlaba ongaphezulu okanye ialluvial ngasemlanjeni, owomileyo. Inyama kufuneka ibe yi-30-40cm ubude kwaye ibe malunga ne-80-100cm ububanzi. . Xa utyala, faka umaleko wesichumisi oxutywe nomhlaba emngxunyeni ukuze xa ubeka imbiza, indawo yokugalela ilingane nomphezulu wethishu, sebenzisa imela ukusika umphantsi wembiza, emva koko wenze i-longitudinal incision yembiza. ukutsala ingxowa yeplastiki kwaye uyigcwalise ngomhlaba. , Izitshizi. Ukuze sibe nomhlaba owaneleyo ukuze iingcambu zikhule, kufuneka songeze umhlaba kwithishu rhoqo ngonyaka. Xa ubeka umthi, kuyimfuneko ukujikelezisa i-graft (ukuba ngumthi odibeneyo) ukuya emoyeni ukuphepha ukuphulwa kwamasebe. Emva kokutyala, kuyacetyiswa ukuba unamathele isibonda ukuze ubambe izithole ngokuqinileyo ukuphepha umoya kunye nemvula eshukumisa iingcambu, okuya kuchaphazela ukukhula komthi. Nika ingqalelo ukuba ungagcwalisi ngomhlaba kwindawo yokuhlumela.
Ngenxa yokuba umthi ngonyaka Ilamuni engenambewu fruiting 4 ukuya 5 amaxesha, ngoko ke akukho mfuneko yokuphatha off-season, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukunika isichumisi ngokwaneleyo ukuba umthi intyatyambo, ukukhulisa iziqhamo nokuphuhlisa. Eyona nto ibalulekileyo ngumlinganiselo we phosphorus kunye ne potassium kwizityalo. Ezi zizinto ezi-2 ezinxulumene nokukhula kunye nophuhliso. Ukongezelela, kuyimfuneko ukusebenzisa i-calcium inyanga nenyanga ukwenzela ukuba inkqubo yokuthutha kunye nokufunxa ngaphakathi kwesityalo yenzeka rhoqo kwaye yinto ebangela ukunciphisa izifo egadini.
Uninzi lweengcambu ze-lemon zikhula zome, ukushisa okuphezulu komhlaba ehlotyeni kuchaphazela iingcambu zemithi ye-citrus, kuyimfuneko ukugcina iingcambu ezinomswakama kunye ne-straw eyomileyo kunye ne-20cm ukusuka kwingcambu. Le ndlela iphinda igweme ukukhula kokhula, kwaye xa i-straw ibolile, iya kunika umhlaba ngobuninzi be-humus. Izityalo zinokudityaniswa (Umbona, iimbotyi, iitapile…) xa izityalo ziseyisilika.
I-Lemon inomdla kakhulu kumanzi, ukuba inqanaba lamanzi emseleni liphezulu kakhulu, linokubangela ukuchithwa kwamanzi kunye nokubola kweengcambu. Ngoko ke, kuyimfuneko ukugcina umgangatho wamanzi egadini 40-60cm kude nomphezulu. Ngexesha lembalela, amanzi kufuneka ashiywe kwindawo yendalo yokuhlamba i-alum, ngexesha lemvula, inqanaba lamanzi egadini liphantsi kunye ne-70-90cm ukusuka phezulu.
Kukuzisa umaleko wodaka omncinci phantsi komsele ukuya kumphezulu malunga ne-2cm ubukhulu.
Izinto eziluncedo: Ibonelela ngezondlo ezininzi zezityalo; ngokuthe ngcembe phakamisa umaleko wokulima; Ukukhutshwa kwamanzi kunokudibaniswa nokutsalwa kwamanzi kunyango lweentyatyambo.
Ububi: Izidumbu ezingekaboli ngokupheleleyo ziya kubekwa phantsi; ngokusebenzisa i-dredging, ngengozi ubeke umaleko we-alum phezu kwebhedi ukuze ubangele ityhefu; Ukoyisa ezi zinto zingeloncedo, sinokuthi sidilize i-sludge rhoqo emva kweminyaka emibini okanye siyibeke ebhedini kwaye sigxile kwindawo enye ukuze yome ngokupheleleyo ngaphambi kokuchumisa izityalo.
Xa ixesha lokuvuna lifika, kodwa ixabiso liphantsi, kunokwenzeka ukuba unamathele isiqhamo emthini ngokusebenzisa izichumisi ze-foliar ekubunjweni kunye namahomoni eqela le-Auxin, i-gibberellin … ifafazwe emthini. Lo mlinganiselo unokubambelela ekhohlo kangangeentsuku ezili-15-30. Nangona kunjalo, i-anchorage ekhohlo egqithisileyo inefuthe elibi ekukhuleni kunye nobomi obude bomthi.
Imithi yeLamuni idla ngokwahlula amathupha entyatyambo kwiimeko ezomileyo, ngoko xa umthi ungenamanzi kangangexesha elithile (ingakumbi kwixesha lonyaka elomileyo) uze emva koko unkcenkceshelwe, umthi uyathanda ukudubula. Ngoko ke, kuyenzeka ukuba kubekho imbalela yokuba umthi weLamuni udubule ngaxeshanye ngokusebenzisa isalamane esaziwa ngokuba “kukukhama amanzi”.
Ukukhama amanzi kwintyatyambo kunezi ngenelo zilandelayo: Izityalo zityatyamba ngaxeshanye; Ingeniso ephezulu yexesha elinye elipheleleyo, elilungele ukukhathalela, ukuchumisa kunye nokuvuna.
Kodwa kukho izinto ezingeloncedo: Iingcambu zivame ukumiliselwa ngexesha lokungankcenkceshele, izityalo ziguga ngokukhawuleza.
Chuba imithi yelamuni engenazimbewu
Imithi yeLamuni kufuneka ibonelelwe ngezondlo ezaneleyo njengezinye izityalo. Noko ke, kuxhomekeka kumhlaba, iindidi kunye nenqanaba lokukhula, bala umlinganiselo wesichumiso esinikelwa minyaka le kwizityalo ezifanelekileyo.
Xa izityalo zisekunyaka woku-1, i-HUMIX Functional Microorganic Fertilizer ingagalelwa kabini ngonyaka, ixesha ngalinye ukusuka kwi-2 kg -3 kg ngesityalo.
Kwimithi yeLamuni kwinqanaba loshishino, kuyimfuneko ukunikela ingqalelo ekufakeni isichumiso kula maxesha alandelayo: Kumthi weLemon ngexesha loshishino (iziqhamo ezizinzileyo zivelisiwe) sebenzisa iHUMIX Bio-Organic Fertilizer Specialized for Citrus fruit. ye-1.5kg – 2kg kumthi ngamnye kube kanye, galela amaxesha ama-3-4 ngala maxesha alandelayo:
Phambi kweentyatyambo: Inceda izityalo ukuba zahlule iintyatyambo ngokukhawuleza.
Emva kokumiselwa kweziqhamo kunye nexesha lokukhula kweziqhamo
Phinda uchumise imithi yelamuni engenazimbewu emva kokuvuna, ukuthena amasebe… .
Inani lamaxesha okuchumisa linokwahluka ukusuka kumaxesha ama 4-6/ngonyaka, ikakhulu kugxilwe kwisigaba sokuvuselela iintyatyambo kunye neziqhamo zomthi.
Ukusetyenziswa kwezichumisi zendalo kufuneka kuthathelwe ingqalelo into yokuba umgquba kufuneka uvundiswe ngokufanelekileyo ukunciphisa iintsholongwane ezibangela izifo emgqubeni. Ngoko ke, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe izichumisi ezincinci zendalo kunye nebhayoloji ukuchumisa iiLamuni ezinje ngokunxitywa okuphezulu ngeHUMIX Bio-Organic Fertilizer Specialized for Citrus trees ekhankanywe ngasentla, ipriming phambi kokutyala okanye ukuchumisa.. emva kokuvuna usebenzisa iHUMIX Functional Microbial Organic Fertilizer endaweni yoko. yezinye izichumisi (inkqubo yokuphatha izinto eziphilayo kunye ne-microorganisms ikhuselekile kwizityalo kwaye iqinisekisa ukusebenza kakuhle kwezondlo).
Ukongeza, kwizigaba zokukhula kunye nophuhliso lwesityalo, yongeza i-High Quality HUMIX Foliar Fertilizer. Ukuba Utshiza, xuba nomlinganiselo we 1/200 (oko kukuthi i-1 litre ye-HUMIX yesichumiso esixutywe nama-200 eelitha zamanzi acocekileyo) kwaye utshize kuwo wonke umthi. Okanye isetyenziselwa ukunkcenkceshela iingcambu, xuba kunye nomlinganiselo we-1/100 (1 ilitha yesichumisi se-HUMIX exutywe ne-100 ilitha yamanzi.
Amanyathelo okwenza i-canopy yeelamuni ezingenambewu:
Ukusuka kwindawo ye-graft (kwi-rootstock) ukuya phezulu malunga ne-50-60cm, uze ucinezele i-bud ukususa i-bud, injongo kukuvumela ukuba amahlumela alale, uze ukhethe kuphela amasebe angama-3-5 ukuphuhlisa ngendlela efanayo. Ukusuka kweli sebe kuya kwenza inqanaba lesi-2, inqanaba lesi-3 lamasebe… umthi uya kuba necanopy engqukuva, elinganayo kwaye elungeleleneyo, xa ngexesha loshishino uya kunika imveliso ephezulu, elungele ukhathalelo, uthintelo lwezinambuzane kunye nolawulo lwezinambuzane.
Ukuthena: Rhoqo ngonyaka, emva kokuvuna, kuyimfuneko ukususa amasebe athwala isiqhamo (adla ngokuba mafutshane kakhulu, malunga ne-10-15cm), amasebe anesifo, amasebe abuthathaka, amasebe alele ngaphakathi kwe-canopy engakwazi ukuthwala isiqhamo. enye.
Kubuchule bokutyalwa kwemithiIlamuni engenambewu Ukuba iza kusebenza, ukuthintela nako kubaluleke kakhulu. Eyona ndlela yokuthintela izifo kukuthena amasebe. Eli nqanaba elichaphazela imveliso kunye nezifo egadini, ngoko jonga rhoqo ukususa amagatsha amadala, abuthathaka, kunye nama-introverted. La ngamasebe angaphuhliswanga ngokwaneleyo, ngoko ke iya kuba lelona nqanaba libuthathaka ukuba izifo ezikwisiqu zingene, uninzi lwezikhondo ezixhaphakileyo.
– Izithole ILemon engenambewu i-cloning ngendlela ye-asexual ngendlela yokufakelwa okanye ukusika
– Izithole zeLemon ezingenazimbewu zikulungele ukutyalwa:
+ Ngemithi ehlonyelweyo esemgangathweni ukusuka kwi-30-40cm ukuphakama, izityalo ezihlonyelweyo ezihlonyelweyo, amasebe ahlonyelweyo sele eneecotyledons kunye namathupha ahluma ngokucacileyo. Ubuncinci ubude bamehlo amiliselweyo yi-15 cm. Nika ingqalelo xa utyala, kukulungele ukushiya amehlo angama-2-4 ahluma.
+ Ngesicatshulwa somthi esisemgangathweni ukusuka kwi-40-60 cm ukuphakama, amasebe athambileyo, anempilo kwaye akhululekile kwizinambuzane kunye nezifo.
– Ukongeza kuhlobo lweSeedless Lemon, iziko lokutyalwa kweAcademy yezoLimo likwabonelela ngenani lezinye izithole zelamuni ezifana ne: Ipesika yelamuni, iBach yekota yesine yelamuni, ilamuni yoMnwe, ilamuni yemarble, imonkey brain lemon,. ..
Qhagamshelana ukuthenga izithole kunye neengcebiso zobugcisa. nceda uqhagamshelane
Iziko leMbewu yeZityalo-uPhando lwezoLimo lwaseVietnam kunye noPhuhliso lweNkampani Limited
Idilesi : Ipaki yeBiotechnology-iVietnam Agricultural Academy-Buffalo Quy Gia Lam Hanoi
Inombolo yomnxeba: 0247 301 6226 -0987884946 -0979589557 – 0981980186
Cây Lan Hạt Dưa hay còn gọi là Lan Đô La | Hatgiongtihon.net